तथ्यांकोवाच : व्यावसायिक केरा उत्पादनमा विद्यमान सम्भावना
काठमाडौं (अस) । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै करीब रू. १ अर्ब ७८ करोडको ७५ हजार मेट्रिक टन केरा आयात भएको छ । गतआवमा केराको मागलाई घरेलु उत्पादनले ७७ प्रतिशत धानेको थियो भने मुलुकले २३ प्रतिशत आयात गरेको थियो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा मुलुकको केराको कुल मागलाई ९८ प्रतिशत आन्तरिक उत्प...
तथ्यांकोवाच : अन्न उत्पादनमा लगानीका सम्भावना
काठमाडौं (अस) । नेपालमा अन्नको आयात औसतमा वार्षिक ४३ प्रतिशत बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै नेपालले करीब रू. ५२ अर्बको प्रमुख खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर) को आयात गरेको पाइन्छ । उत्पादन भने विगत १० वर्षमा करीब २ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्रै बढेको देखिन्छ । जग्गा बाँझो राख...
तथ्यांकोवाच : सुर्ती खेतीमा विद्यमान सम्भावना
काठमाडौं (अस) । सुर्ती र चुरोट सेवन स्वास्थ्यका हानिकारक छ । परन्तु, आयात गरेरै सुर्ती र चुरोट सेवन गर्नुभन्दा स्वदेशी सुर्ती तथा चुरोट सेवन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भए पनि हितकर हुन्छ । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कच्चा सुर्तीको आयात वार्षिक ६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । विश्व ख...
काठमाडौं (अस) । मुलुकभित्र प्रशस्त मात्रामा धूप उद्योग रहे पनि आन्तरिक मागलाई धान्ने गरी धूप उद्योगको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । विगत १० वर्षयता धूपको आयात औसतमा वार्षिक २१ प्रतिशत बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७४ मा मात्रै करीब रू. ४१ करोडको धूप आयात भएको छ । विश्वमा पनि धूपको माग विगत ५ वर्षम...
काठमाडौं (अस) । सानो पूँजी र साधारण प्रविधिमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने दालमोठ, पापड, भुजिया जस्ता उत्पादनमा समेत मुुुलुक परनिर्भर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करीब रू. ६३ करोड ८० लाखबराबरका यी वस्तुको आयात भएका छन् । विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि ७ प्रतिशत छ । यसले नेपाली बजार यी उत्पादनका ला...
काठमाडौं (अस) । नेपालमा तरकारी आयात वर्सेनि ३३ प्रतिशतले बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७७ को पहिलो एघार महीनामा नै तरकारीको आयात रू. १४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । परिमाणका आधारमा हेर्दा यस अवधिमा अदुवा मात्रै करीव ८ लाख मेट्रिक टन आयात भएको छ । एकातिर मुलुकमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेक...
काठमाडौं (अस) । नेपालको हावापानीमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने मेथीको आयातमा वर्षेनि औसत ३४ प्रतिशतको बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब रू. २० करोड बराबरको मेथी आयात भएको थियो । भारत मेथीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र निर्यातक देश रहेको र भारतको जस्तै वातावरण भएको नेपालमा पनि मेथीमा आत्मनिर्भर हुँद...
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) र अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) अन्तर्गतको इन्टरनेशनल नेटवर्क अन फाइनान्सियल एजुकेशन (आईएनएफई को संयुक्त आयोजनामा असार १७ र १८ गते काठमाडौंमा उक्त सम्मेलन हुने भ...
काठमाडौं (अस) । नेपालको जलवायु बेसार खेतीका उपयुक्त भएता पनि केही वर्षयता बेसारको आयात भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा बेसार आयातको औसत वार्षिक वृद्धि करीब ५७ प्रतिशत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब रू. १७ करोडको बेसार आयात भएको छ । यस अवधिमा रू. ३७ लाख बराबरको करीब...
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षमा इरेजरको आयात वार्षिक सरदर २० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै इरेजरको आयात रू. ४ करोड ४६ लाखजति पुगेको छ । विश्वमा करीब १६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रबरको इरेजरको आयात व्यापार हुने गरेको छ । विश्वमै इरेजरका प्रमुख आयातकर्ताहरूमा रूस, संयुक्त राज्य अम...